अन्ततः बिद्या भण्डारी नै फेरी राष्ट्रपतिमा यति मतले निर्वाचित भईन्, बिगत देखि वर्तमानमा उनको भूमिका यस्तो छ - Enepal Serofero
Prev“आमा ! म घर फर्कँदै छु नि ! अब त हजुरको छोरो डाक्टर भयो लगभग ! अन्तिम परिक्षा पनि सकियो ! आमा ! आमा फर्किँदा के ल्याइदिनु ?
Nextविमान दुर्घटनाः २२ नेपालीको निधन, सबैको ठेगाना पहिचान(सुचिसहित)